Golaha ammaanka QM oo maanta ka shiraya xaaladda Itoobiya | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Golaha ammaanka QM oo maanta ka shiraya xaaladda Itoobiya
WIde The situation in Somalia Report of the Secretary-General on Somalia (S/2019/884)
New York-(SONNA)-Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa lagu wadaa inuu maanta xaaladihii ugu danbeeyay ee colaadda Itoobiya warbixin kooban ka siiyo xubnaha Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Guteres ayaa si gaar ah uga hadli doono tallaabadii ay Itoobiya ku eriday toddoba xubnood oo ka tirsan saraakiisha laamaha gargaarka ee Qaramada Midoobay.
Waa kulankii labaad oo uu Golaha amaanka ka yeelanayo arrimaha Itoobiya wax ka yar hal todobaad tan iyo markii uu Ra’isul Wasaare Abiya Axmed 30-ki bishii September ku dhawaaqay in muddo 72 saacadood ah ay uga baxaan qaar ka mid ah saraakiisha Qaramada Midoobay ee ku sugan dalkiisa.
Itoobiya ayaa ku eedeeysay saraakiishan ay dalkeeda ka eriday in ay faragelin ku hayeen arrimaha gudaha ee dalkeeda, isla markaana ay mucaawinooyin iyo qalab is-gaarsiineed u gudbiyeeen Jabhadda Xoreynta Tigray ee loo soo gaabiyo (TPLF), taas oo ay dowladda federaalka dagaal kula jirto tan iyo dabayaaqadii sannadkii hore.
Previous articlemasuuliyiin sar sare oo ka kala socda Maraykanka iyo Shiinaha ayaa maanta kulan wada qaadan doona
Next articleMuwaadin Soomaaliyeed oo ku geeriyooday shil ka dhacay Mareykanka